🌲 Keydka Dabeecadda | Booqo Hultsfred
Mid dabeecad leh!
La kulan dabeecadda sixirka Småland markay ugu qurux badan tahay. Kaymo la soo jiitay oo jiilal aan la taaban laga helin, harooyin dhalaalaya iyo dhagxaan waaweyn oo moss daboolan. Dhammaantood hodan ku ah dhirta iyo xayawaanka labadaba. Ma ogtahay inay jiraan ilaa 11 keyd dabiici ah oo lagu booqdo degmadeena?
Keydka dabiiciga ee Alkärret
Keydka dabiiciga ee Alkärret waa mid ka mid ah noolaha noogu hodanka badan keymaha, wuxuuna caan ku yahay rahyada, salaamanders iyo dhirta kale ee biyaha. Thanks to sahayda nafaqada ee wanaagsan iyo
Kaydka dabiiciga ee Knästorps
Kaydka dabeecadda ee Knästorps waa aag noocyo badan leh oo leh noocyo deegaan oo kala duwan sida kayn dabiici ah oo dabiici ah, kayn oak ah, kayn geed dabka ku calaamadeysan, daaq furan iyo dhul qoyan. Seeraha dabiiciga ee Knästorps waxaa ku jira haraagii tuuladii qarnigii 1700-aad
Keydka dabiiciga Lunden
Reserve nature Lunden - qayb ka mid ah dabeecadda Småland markay ugu qurux badan tahay. Kaydka dabeecadda ee Lunden waa cirif dhaadheer oo qurux badan. Geedku waa mid
Keydka dabiiciga Slagdala
Kaydka dabeecadda Slagdala, oo qayb ka ah jiingadda Virserum, ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah qaab-dhismeedka qotada dheer ee koonfurta Iswiidhan. Markii ay barafku dib u gurteen qiyaastii 10 oo sano ka hor
Qolka shimbiraha Ryningen
Hulingsryds keydka dabiiciga
Hulingsryd waxay ku taalaa woqooyiga harada Hulingen waxayna bixisaa deegaanno wabiga lagu ilaaliyo, kaymo xeebeed leh, kaymo geedo qalalan, daaq u furan iyo meela kale oo qoyan. Qaybo waaweyn ayaa maanta jira
Keydka dabiiciga ee Länsmansgårdsängen
Kaydka dabiiciga ee Länsmansgårdsängen waa goob socod caan ah oo ku ag taal Virserumssjön waxeeyna leedahay lindiyaal qadiimi ah oo qurux badan. Aagga ilaa harada, bjchrk wuxuu ku koraa waxyaabo ay ka mid yihiin
Keydka dabiiciga ee Kraskögle
Kaydka dabiiciga Grönudde
Guud ahaan Grönudde waxay leedahay dabeecad kayn dabiici ah, tusaale ahaan kaymo hore oo la mid ah. Kaynta aagga ku taal waxay ka kooban tahay kayn geed geedeed oo adag iyo kayn coniferous ah oo duug ah oo ay u badan tahay gran iyo
Servellevadsån dooxada dabiiciga
Dooxada Sällevadsån waxaa ku nool qaar ka mid ah noocyada dhirta iyo xayawaanka Iswiidhan ee dabar go'aya. Sällevadsån waa qayb ka mid ah nidaamka biyaha Emån. Socodka biyaha degdega ah macnaheedu waa in ay jiraan biyo furan
Keydka dabiiciga Stensryd
Keydka dabiiciga ee Björnnäset
Waa keyn sixir dhab ah oo leh geedo duug ah oo hareeraha ka taagan dhagxaan dhagxaanta lagu daboolay. Keydka dabiiciyan ee Björnnäset wuxuu ku yaalaa magaalo madaxeedka Åkebosjön. Kaydka ayaa ku yaal